Ku Biirista Alvaro Morata Ee Kooxda Barcelona Oo La Dhameeyay Inta Ugu Badan
HomeWararka CiyaarahaKu biirista Alvaro Morata ee Kooxda Barcelona oo la Dhameeyay inta ugu badan
January 4, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran tahay inay dhameystirto saxiixa Alvaro Morata oo ay kala soo wareegayaan Atletico Madrid .
Mustaqbalka xiddiga heerka caalami ee dalka Spain ayaa maalmihii u dambeeyay aad loo hadal hayay, iyadoo maamulaha Barcelona ee Xavi uu sheegay inuu go’aansaday inuu weerarka dhexe keeno Camp Nou.
Sida laga soo xigtay AS , heshiiska ayaa durba ‘95% la sameeyay’, iyadoo Morata uu qarka u saaran yahay inuu amaah ugu biiro kooxda reer Catalonia inta ka harsan xilli ciyaareedka, halka sidoo kale ay jiri doonto ikhtiyaar wax iibsiga mustaqbalka.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Xavi uu 29-sano jirkaan u arko mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka, waxaana laga yaabaa inuu diyaar u noqdo kulanka Super Cup-ka Spain ee ay la ciyaarayaan Real Madrid 12ka Janaayo.
Morata ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxda amaahda ah ee Juventus intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay toddobo gool, waxaana uu ka qeyb qaatay seddex caawin 23 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Xiddiga reer Spain ayaa sidoo kale saftay 112 kulan oo La Liga ah intii uu joogay Real Madrid iyo Atletico isaga oo shabaqa soo taabtay 43 jeer, marka lagu daro 9 caawin.